DEUL Classic Ragdoll Shooter 1.6.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.6.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ DEUL Classic Ragdoll Shooter
DEUL Classic Ragdoll Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျ DEUL အတွက်လုံလောက်သောအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါသလား
DEUL သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အချိန်ကိုက်စုံစမ်းမည်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းပွေးညီအရေးယူထုပ်ပိုးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကမ်ဘာအနှံ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနှင့်တရုတ်, လန်ဒန်, ရုရှားနှင့်ဘရာဇီးအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း duel အဖြစ်ထွက်-သရေကျပြိုင်ဘက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအောင်ပွဲသင်မှတ်ဝင်ငွေနှင့်သင့်ရမှတ်တိုးမြှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆောင်တက်မယ့်မြင့်မားတဲ့ရမှတ်ရလိမ့်မယ်အဖြစ်အသွေးသည်သင်တို့၏ overkill နှင့်အတူပျံသန်းကြကုန်အံ့။ လယ်ယာတိုကင်ဖို့အပိုဆောင်း Mini-ဂိမ်း Modes သာ Play! အသတ်ခံရမ junk shoot သို့မဟုတ်သင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့တင်းပါးကန်ဖို့ပတ်ပတ်လည်ကသင်၏ ragdoll ဆွဲယူ!
တက်မြင့် & သင့်ရဲ့ duels အနိုင်ရသောနည်းလမ်းအသစ်များကိုသော့ဖွင့်ဖို့တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်အနိုင်ရ။ သင်ကစားပွဲထဲမှာနောက်ထပ် get အဖြစ်သင့်ဇာတ်ကောင်အသစ်က Company နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း get အဖြစ်ကိုလည်းသင်စတိုင်ထုတ်တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်သည်။
အားလုံးသင့်ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်မှုဒေတာမိုဃ်းတိမ် (သင့်ဇာတ်ကောင်များအတွက်စာရင်းဇယား, ဝယ်ယူမှုများနှင့်ပစ္စည်းများ) သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ Real-time အတွက်လွတ်လပ်စွာ devices များအကြား Switch များနှင့်ကစားစောင့်ရှောက်လော့။
DEUL Classic Ragdoll Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DEUL Classic Ragdoll Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DEUL Classic Ragdoll Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DEUL Classic Ragdoll Shooter အား အခ်က္ျပပါ
savage01 စတိုး 1 23
DEUL Classic Ragdoll Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DEUL Classic Ragdoll Shooter အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.6.7
ထုတ်လုပ်သူ Greenlight Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://greenlightgames.co.uk/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: AF:6C:8C:5E:87:09:72:54:F0:92:49:BB:E7:65:DC:E5:54:EE:55:EC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Dean Day
အဖွဲ့အစည်း (O): Greenlight Games
DEUL Classic Ragdoll Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ